अहिलेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था उहिलेका ‘मुखिया'
काठमाडौं । सहकारी संस्थाले उत्पादनमा लगानी आर्कषण गर्न नसकेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ती संस्थाका बचतकर्ताले चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य भएकाले अहिलेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था उहिलेका..
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘मर्जर’मा जान प्रोत्साहन, क्षेत्रीय बैंकलाई राष्ट्रियस्तरमा जान अबसर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन ९मर्जर०का लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । बैंकले एक निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३..
प्रतिबन्धित भारु २००, ५०० र २००० को नोट चलाउन राष्ट्र बैंकको रिजर्ब बैंक इन्डियालाई पत्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० दरका नयाँ नोट नेपालमा चलाउन अनुमति दिन अनुरोध गर्दै भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्ब बैंक इन्डिया (आरबिाई)लाई पत्राचार गरेको छ..
२३ करोड वटा ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० रुपैयाँ दरका २३ करोड प्रतिनोट छाप्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले नोट छापाइका लागि ग्लोबल टेन्डर पनि आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब..
सेञ्चुरी बैंक र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्सको सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट उक्त कम्पनीको बिमा लेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम..
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेशकुमार भट्टराई नियुक्त
काठमाडौ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेश कुमार भट्टराई नियुक्त भएका छन् । पुस १७ देखि लागु हुने गरेर कम्पनीको संचालक समितिले चारवर्षको लागि भट्टराईलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो..
मिस नेपाल श्रृङ्खला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्राण्ड एम्बेस्डर
काठमाडौ । मिस वर्ल्डको टप १२ मा पुग्न सफल बनेकी मिस नेपाल श्रृङखला खतिवडा राष्ट्रिय वाण्ज्यि बैंकको ब्राण्ड एम्बास्डर बन्ने भएकी छन् । मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामार्फत् नेपालको नाम विश्वभर चिनाएकी खतिवडालाई..
मेगा बैंकका शाखामा ‘कस्टमर केयर अफिसर’
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले राजधानीका आठ वटा शाखामा ग्राहकका लागि विशेष सुविधा सुरु गरेको छ । बैंकमा सेवा लिन आउने ग्राहकको सहजताका लागि बैंकले ‘कस्टमर केयर अफिसर’ नियुक्त गरेको..
यि १४ बैंकका ग्राहकलाई सन डे, फन डे र वाह् ओईनस्डे भिसा कार्ड लोयल्टी योजना
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंककाृ भिसा कार्ड संजालसँग आवद्ध रहेका १४ वटा बैंकहरुले भिसा कार्ड लोयल्टी योजना ल्याएका छन् । सन डे फन डे र वाह् ओईनस्डे गरी दुुई भिन्न..
एनआईसी एशिया बैंक र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स बिच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापछि अब बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएका २७० वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी..
सिटिजन्स बैंकको प्रदेश नं २ को कार्यालय बीरगंजमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडल आईतबार प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय बीरगंजको आदर्शनगरमा आरम्भ गरेको छ । उक्त कार्यालयको आरम्भ समारोहमा जिल्लाका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ..
सबैको लघुवित्तको साधारण सभाबाट आईपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । तनहुँको बन्दीपुर १ डुम्रेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आईपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव सहित कम्पनीको दोस्रो वर्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । संस्थाकी अध्यक्ष सृजना जोशीले..
सिटिजन्स बैंकको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा स्थापना
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले शुक्रवार १ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा स्थापना गरेको छ । कार्यालयको उद्घाटन समारोहमा जिल्लाका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा नागरिक..
बीमा कम्पनीले एजेन्टलाई विदेश भ्रमणमा लैजान नपाउने
काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्टलाई विदेश भ्रमणमा लैजान नपाउने भएका छन् । एजेन्टलाई विदेश घुमाउन लैजाने बीमा कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धाले संस्थागत सुसमसनमा समस्या आएको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विदेश..
कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल उपाध्याय नियुक्त
काठमाडौं। कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल उपाध्याय नियुक्त भएका छन्। लीलाप्रकाश सिटौलाको कार्यकाल गत मंसिर २७ गते सकिएपछि नयाँ प्रुमख कार्यकारीमा उपाध्यायलाई नियुक्त गरिएको हो। उनलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट..
इ-बैंकिङको दुरुपयोग गरी पैसा निकाल्‍ने युवक पक्राउ
काठमाडौं । कोर बैकिङ सिष्टमको दुरुपयोग गरी अनधिकृत रुपमा पैसा जम्‍मा गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवालाई पक्राउ गरेको छ। राष्ट्र विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग गरेर आफ्नो खातामा अनधिकृत रुपमा ७८ हजार ३..
एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा सुनसरीको प्रकाशपुर र इनरुवामा
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखा कार्यालयहरु सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका वडा १ शान्तिचोक र बराहक्षेत्र १० स्थित प्रकाशपुरमा विस्तार भएको छ । इनरुवा शाखाको इनरुवा नगरपालिकाका मेयर..
कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारीका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस, को को छन् ?
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि पहिलो चरणमा ५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट समितिले १७ जना आवेदकहरु मध्येबाट बैंक सञ्चालनको कार्ययोजनाका..
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सेञ्चुरी बैंक बिच बैंकासुरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्याल र सेञ्चुरी..
महालक्ष्मी विकास बैंकको चिप युक्त डलर कार्ड सञ्चालनमा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहक वर्गका लागि चिप प्रणालीमा आधारित महालक्ष्मी डलर कार्ड सार्वजनिक गरेको छ । संसारको जुनसुकै ठाउँबाट कार्ड सम्बन्धी बैकिङ्ग कारोबारलाई अझ सुरक्षित, विश्वसनीय तथा..
प्राईम कमर्सियल बैंकको १६ प्रतिशत बोनस घोषणा
काठमाडौं । प्राईम कमर्सियल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले गत आवको वितरणयोग्य मुनाफाबाट १६ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव..
राष्ट्र बैंकको दबावले भएको भद्र सहमतिपछि कुन कुन बैंकले कति घटाए ब्याज ?
काठमाडौं। गभर्नरको निर्देशनमा बैंकर्स संघले ब्याज दरमा भद्र सहमति गरे लगत्तै शुक्रबार अधिकांस बैंकले निक्षेपको ब्याज झारेका छन्। सहमति खारेज हुँदा १३ वटा बैंकले ब्याज बढाएका थिए। बिहीबारको सहमतिपछि अधिकांस बैंकले..
लघुवित्तले फेरिएको गिट्टी कुटनको जीवन
लमही । कुनै समय गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गरिरहनुभएकी दाङ लालमटीयाका दुर्गा सार्कीले व्यवसायलाई निन्तरता दिएका कारण आम्दानी गर्नाका साथै पक्की घरसमेत निर्माण गर्न सफल हुनुभएको छ ।ग्रामीण महिला उत्थान..
राष्ट्र बैंकको दवाबपछि डराए बैंक, घट्यो व्याज, अब कति नयाँ व्याजदर ?
काठमाडौं । केही दिनदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याजदर घटाउन दवाब दिए पछि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ भद्र सहमति गरेका छन् । बिहीबार मात्र राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिलाई..
अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर बृद्धिले एसियाली बजार ओरालो
हङकङ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक(फेड)ले ब्याजदरमा वृद्धि गरेसँगै अमेरिकी र एसियाली शेयर बजार ओरालो लागेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्याजदर नबढाउन पटकपटक आग्रह गरेपनि फेडका अध्यक्षले यसैवर्ष चौथो पटक..
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच सरकारले चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरे बमोजिम २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बुधबार आयोजित..
काठमाडौं । कतारको राष्ट्रिय बैंक दोहा बैंकको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा स्थापना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार आयोजित समारोहमा उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । त्यस..
काबेली विकास बैंकले ३५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाण्डौ । काबेली विकास बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत शेयर लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट शेयर लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । बैंक सञ्चालक..
मेगा बैंकले १ प्रतिशत बोनश शेयर दिने
काठमाडौँ। मेगा बैंकले लाभांस प्रस्ताब गरेका छ । मेगा बैंकले सात प्रतिशत लाभांस प्रस्ताब गरेको छ। जसमा ६.८५ प्रतिशत नगद लाभांस प्रस्ताब गरेको छ भने एक प्रतिशत बोनस शेयर दिने..
हिमालयन बैंकको लाभांश घोषणा, बोनस कति ?
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । पुस ३ गते मंगलबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको ३६४ औं बैंठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को..
Results 1896: You are at page 10 of 64